Indawo epholileyo kwiziko leeshishini
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguOlga
Indlu epholileyo ebekwe kanye kwindawo yeshishini kunye nembali ye-Ekaterinburg.
Ikumgama ohambahambayo ukuya: ICathedral yoBathathu Emnye, iDendrariy Park, i-Observation Deck, i-1905 square kunye neyona ndawo ithandwayo phakathi kwabahlali-iPlotinka kunye ne-Boris Yeltsin Presidential Centre.
Nangona le ndawo ingqongwe yikhefi, iindawo zokutyela, iibhari kunye neevenkile ezinkulu- izolile kwaye izolile.
Ifulethi lethu elipholileyo nelicocekileyo litsha kraca kwaye linayo yonke into efunekayo yokuhlala kamnandi kwiindwendwe zethu. Kukho igumbi lokuhlala elikhulu elinebhedi kunye nesofa, ikhitshi enezinto zonke ezifunekayo ekuphekeni kunye negumbi lokuhlambela elinomatshini wokuhlamba.
Iyadi yesakhiwo sokwakha icocekile kwaye inokhuseleko lwe-24/7. Isakhiwo esineflethi ngokwaso sinendawo yokwamkela iindwendwe ngoko ke sikwakhuselekile kwaye sikhuselekile. Nangona indawo yeflethi ilungile embindini - izolile kwaye izolile.
Owu, kwaye ngaba sikhankanye imbonakalo entle evela efestileni?
Isithili sithathwa njengeziko leebhasi kunye nembali ye-Ekaterinburg. Kwangaxeshanye uzolile kwaye uzolile. Yindawo entle njengoko ikumgama wokuhamba ukuya kwezona ndawo zibonwayo zidumileyo!
Umbuki zindwendwe ngu- Olga
Ukuba ufuna isikhokelo esixekweni, oonyana bam ababini bathetha isiNgesi kakuhle kwaye bayazazi ezona ndawo zibalaseleyo esixekweni abanokukubonisa zona!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Yekaterinburg